Somali / March 9, 2020
Waalidka iyo Mas'uuliyiinta sharafta leh ee dugsiyada cherry Creek:
Badbaadada, caafimaadka iyo samaqabka ilmahaaga iyo shaqaalaheena had iyo jeer waa ahmiyadeena ugu saraysa dugsiyada Cherry Creek. Xaaladda hada jirta ee dilaaca aduunka ee cudurka korona fayraska (COVID-19) wuxuu u baahan yahay fiiro gaar ah, qorsheyn iyo hirgelinta siyaabo gaar ah oo looga hortago iyo yareyntiisa. Iyada oo xaaladani ay ku soo aadayso waqtga gu'ga, waxaan idinku wargalin doonaa talaabooyinka ay degmadu qaadayso si loo ilaaliyo caafimaadka ardayda, shaqaalaha iyo bulshada.
Waqtigaan la joogo, Guddiga Qorsheynta waxyaabaha Faafa ee CCSD, oo ay ku jiraan xubno ka tirsan Kooxda Adeegyada Caafimaadka, Guddiga La-talinta Caafimaadka ee Degmada iyo Kooxda Hoggaaminta Degmada, ayaa maalin walba kulma todobaadka iyo Axadaha. Gudiga degmada ee ka hortaga Cudurada Faafa, iyo Qorshaha Diyaarinta oo (markii ugu dambeysay ee la istcimaalo ay ahayd mudadii H1N1 iyo Hargabka Doofaarka) yaa dib loo cusbooneysiiyay si loogu daro COVID-19. Inta qorshahu socdo, waxaan raacaynaa hagida Waaxda Caafimaadka ee Tri-County (TCHD), Waaxda Caafimaadka iyo Deegaanka ee Colorado (CDPHE) iyo Xarunta Xakamaynta Cudurada (CDC).
Ilaa iyo hada, Iskoollada Degmada Cherry Creek waxay hirgalisay talaabooyinka ka hortagga ah:
Nadiifinta gacmo nadiifiyaha la ogolaaday yaa lasiiyay dhamaan iskoolada iyo xarumaha degmada. Gacmo nadiifiyaasha yaa la dhigay iridaha ugu muhiimsan ee iskoolada iyo dhismayaasha oo dhan oo ay la socdaan calaamado u muujinaya ardayda, shaqaalaha iyo dadka soo booqanaya sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo naftooda iyo kuwa kale:
Gacmaha u dhaq si joogto ah
Isticmaal gacmo nadiifiyaha
Iska ilaali salaanta gacmaha
Dabool qufaca iyo hindhisada
Iska talaal hargabka
Guruga jog markaad jirantahay
Waxaan hada ku hawlan nahay sidii aan u kordhin lahayn kaydka gacmo nadiifinta, saabuunta, galoofyada iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nadaafada.
Waxaan bilownay olole gacmo dhaqi ah si aan ardayda ugu wacyi galino muhiimadda gacmaha dhaqistu leedahay si looga hortago faafitaanka koronaviruska iyo cuduro kale oo badan.
Todobaadka oo dhan, shaqaalaha dhismayaasha waxay diirada saaraan nadiifinta aagagga “si heer sare ah” oo leh daawada jeermiska disha ee aadka waxtarka ugu leh iskoolada iyo xarumaha degmada. Basaska sidoo kale waa laga nadiifiyaa jeermiska si joogto ah. Nadiifin dheeraad ah ayaa dhici doonta waqtiga fasaxa gu'ga.
Waxaan sidoo kale joojiyay dhamaan iskoolada iyo degmada martigalinta iyo safarkacaalamiga ah iyo u-socodaalka gobolada illaa ogeysiis dambe. waxaa ku jira safarada ardayda iyo safarka shaqaalaha ee horumarinta xirfadeed. Arinkan ma ahayn go'aan fudud, laakiin waa mid loo sameeyay danaha ugu wanaagsan ee ilaalinta caafimaadka iyo samaqabka ardayda iyo xubnaha shaqaalaha.
Hadii aad jiran tahay, guriga joog:
Waa muhiim inaad guriga joogtid hadaad jiran tahay. Waxaan ka codsaday dhamaan macalimiinta inay siiyaan waqti dheeri ah iyo dabacsanaan ardayda si ay uga soo kabtaan shaqada iskoolka ka maqnaanshahooda dartiis.
Si aan u taageerno raadraaca saxda ah iyo qorshooyinka xiga ee iskoolada, waxaan kaa codsaneynaa macluumaad dheeri ah, oo faahfaahsan markaad u soo wacayso ilmahaaga inuu jiranyahay.
Xaalada hada ee Iskoolada cherry Creek:
Laga bilaabo qoraalkan, Maarso 9, 2020, ma jiraan kiisas caan ah oo COVID-19 gudaha ah ama saameyn ku leh dugsiyada Xaqiijinta kiis kasta waxay maraysaa Waaxda Caafimaadka ee Tri-County.
Waxaan kula talinaynaa waalidiinta inay bilaabaan inay tixgeliyaan qorsheyaal kale oo loogu talagalay daryeelka ilmaha hadii ay dhacdo inaan xirno iskoolada. Go'aan kasta oo lagu xirayo iskoolada waxay ku saleysnaan doontaa baahida dugsi walba, oo waxaan raaci doonnaa hagitaan ka socota Waaxda Caafimaadka ee Tri-County markii aan go'aankan qaadanno.
Macluumaadka waalidiinta ee ka socda ururka qaranka ee cilmu-nafsiga ee dugsiyada Waxaa laga yaabaa inay ku caawiso inaad kala hadasho ilmahaaga wax ku saabsan koronaviruska, hadii ay qabaan su'aalo.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan idinla soo xiriirno si joogto ah inta ay xaaladan taagantahay. Waxaan sidoo kale soo dhajinaynaa wargalinta macluumaadka Korona fayraska bogga websaydhka ah ee Iskoolka 'cherry Creek'. Fadlan ogsoonow inaan xaaladan si dhab ah u qaadno oo aan wax walba oo awodeena ah isticmaalayno si aan u hubinayno caafimaadka iyo wanaagga dhamaan ardayda, shaqaalaha iyo qoysaska bulshadeena.